FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA RAT-CHA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika rat-Cha
Alika mitambatra Chihuahua / Rat Terrier
Ace the Chihuahua, Rat Terrier mifangaro amin'ny 1 taona sy 9 volana— 'Ace dia fanomezana tsy nampoizina avy amin'ny namako akaiky indrindra. Tiany ny milalao kilalao sy baolina tenisy. ny toetra tena matanjaka sy mitaky be raha resaka zavatra tadiaviny no resahina. Tena tia ahy sy ireo namako akaiky indrindra izy. Eo imasom-bahoaka, izy mieboebo be ary tsy hamela na iza na iza hanafika azy. Ento miaraka amiko na aiza na aiza izy ary izy no tiako amin'ny fiainako ... :) '
Ny Rat-Cha dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Rat Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ity i Zoey. Izy dia alika kely 11 volana avy any Boston, MA. Izy dia mpamonjy voina avy amin'ny mpiompy alika iray voampanga ho nanararaotra biby. Izy dia 1 tamin'ny alika kely 8 izay navotana. Antsasaky ny Rat Terrier ary ny antsasaky Chihuahua izy. Ny dadany dia manga merina Chihuahua, izay nanjary geney any Zoey. Nahita ny karazana merle rehetra aho taloha, saingy tsy mbola tamin'ity loko ity. Jereo ny fisarahana loko eo an-tampon-dohany, miseho eo ambanin'ny saokany ihany koa izy, miaraka amina tsipika tonga lafatra midina afovoan'ny lohany. Zoey nantsoina hoe an Alika Bibidia Afrikana na Hyena avy amin'ny besinimaro amin'ny diabe hatrany. Zoey dia tena mamy sy mahavariana ary mahay koa. Nianatra baiko haingana be izy ary tia nankany amoron-dranomasina. Mitaky ny fifantohana i Zoey ary hikororoka rehefa tsy mandeha ilay diva. '
'Rat-Chas (mifangaro Chihuahua / Rat Terrier) —ieto ny Peanut ary i J.P. Peanut dia 6 taona ary i J.P dia 2. Samy manana ny toetrany tanteraka izy roa tonta noho ilay hybrid iray ihany! Tena kamo ny voanjo! Ny fiainany manontolo dia tsy misy afa-tsy ny matory sy mipetraka eo am-pofoako. J.P. dia feno hery ! Hihazakazaka tontolo andro izy raha afaka. Izy ireo dia samy alika lehibe ary hatrizay nananako tsy misy olana amin'izy ireo na inona na inona! '
'Ity no Beamer, fifangaroan'ny Rat Terrier / Chihuahua. Manodidina ny 5 taona izy ary nentina tao an-tranonay avy tao amin'ny toeram-pialofana biby. Tiany ny fifandraisan'olombelona ary tokony ho eo afovoan'ny hetsika izy. Satria avy any amin'ny toeram-pialofana izy, tsy mazava amintsika ny tantarany, saingy fantany fa tsy dia mahay loatra izy amin'ny ankizy kely ary alika hafa , indrindra ny lahy lehibe kokoa noho izy. Mahazo isika nandeha in-2-3 iray andro dia mihinana sakafo alika maina . '
'Ity Rilo malalako Rilo, ary tsy afaka nifaly niaraka taminy aho. 9 volana izy amin'ity sary ity ary efa angovo be dia be . Tiany ny mihady ao anaty lamba firakotra rehefa alina ary avy eo mivelatra tanteraka. Tiany ny milalao alika hafa, saingy tsy maintsy mamofona azy ireo aloha izy. Alohan'ny ahazoany aina dia mitazona ny halavirany fotsiny izy. Hatreto dia mbola tsy mpankafy alika be izy.
'Niasa 13 ora andro aho ary nanomana ny mariaziko tamin'ity enim-bolana lasa teo ity, ary ny toetrany be fitiavana sy ny fahafinaretany fatratra rehefa mody aho fa ny vatany iray manontolo dia mihozongozona dia ampy hitandrina ny saiko. Ny fahazaran-dratsiny ratsy fotsiny dia ny hoe raha maheno lakolosy na zavatra mitovy amin'ny fahitalavitra izy dia hanomboka hibolisatra. Notohizany mandeha alina toy ny fanatanjahan-tena. '
'Cesar Millan dia iray amin'ireo olona vitsy amin'ny fahitalavitra izay tena misy tokoa ankehitriny. Tena tiako ny seho nasehony ary nampihatra zavatra maro tamin'ny biby fiompiko aho. Omaly fotsiny dia lasa ratsy toetra ilay alika vaovaonay ary napetrako tamin'ny fomba manoa izy ary lasa nandeha fotsiny. Tsy nanao an'izany fihetsika izany izy nanomboka teo. Tsy nila fanazaran-tena firy i Rilo dia te hanao zavatra sy ny zavatra rehetra hampifaliana ahy izy, ka tsia no tsotra. Mametraka ny tenako amin'ny endrika milamina sy mazoto aho rehefa mifampiraharaha amin'ny biby fiompiko, ary mihaino ahy izy ireo, ka mandeha ny filozofiany, na ho an'ny olona tsy zatra fiofanana aza. '
Zanakavavy Rat-Cha amin'ny 6 volana sy 6 pounds— 'Tiany ny mitsambikina avo indrindra, tia oroka, ary alika tonga lafatra! Tiany ny Chihuahuas sy alika kely hafa. Mihazakazaka avy amin'ny lehibe anefa izy. Mora nampiofana izy ary ilay alika mamy indrindra hatramin'izay! Ny reniny dia Chihuahua 100% ary ny rainy dia 100% Rat Terrier. '
Abigail Rose ilay rat Rat-Cha tamin'ny faha-6 volana— 'Tsara toetra izy. Mipetraka izy, milalao fakana ary mandry amin'ny baiko rehetra, ary izy koa dia voan'ny trano. Tiany ny fijerena ary hanao zavatra rehetra hiarahana amin'ny dadany (ahy) LOL. Tena mora nampiofana izy. Vao iray volana teo ho eo vao vita daholo ireo zavatra telo ireo. '
Bud, fifangaroana eo amin'i Chihuahua sy Rat Terrier (hybrid Rat-Cha), manodidina ny 1½taona eo ho eo ny lanjany manodidina ny 15 pounds.
Lula Belle the Rat-Cha zazavavy kely mahafatifaty, eo amin'ny faha-15 volana - hoy ny tompony, 'Tena mavitrika izy, saingy toy ny atiny mipika eo am-pofoako ihany. Mahalana izy no mivovo ary manao izany rehefa tena mientanentana eo am-pilalaovana isika. Nianatra vetivety izy tamin'ny fampiasana ny Wee-Wee Pad. Manome valisoa azy aho amin'ny fitsaboana aty isaky ny misy poos. Amin'ny herinandro 15 dia eo amin'ny 5-6 pounds izy. Tiany ny matory eo ambanin'ny tongotro eo am-pijerena fahitalavitra na amin'ny solosainako. Fifaliana sy fampihorohoroana izy indraindray, fa tsy hatakaloko azy ho an'izao tontolo izao. '
Barkley, Rat-Cha 4 volana miaraka amin'i Cy, saka saka saka — i Barkley dia fifangaroana eo amin'ny Chihuahua sy Rat Terrier.
Little Tinker Tot ny alika kely Rat-Cha eo amin'ny 7 herinandro eo ho eo
Hijery ohatra hafa momba ny Rat-Cha
Sary Rat-Cha 1
tertera scottish sy mix dachshund
inona no afangaro amin'ny boxer-ko